पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथामिकता – News Portal
September 19, 2019 epradeshLeaveaComment on पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथामिकता
नेपालको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारहरु स्वतन्त्र सरकारका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आफै नीति, नियम, कानून निर्माण गर्दै कार्य सञ्चालन पनि स्थानीय सरकारहरुले गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा चुनौती पनि स्थानीय सरकारमा धेरै देखिन्छन् ।
स्थानीयहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो योजना अनुसार गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरको विकास र जनताको अपेक्षा अनुसार पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथामिकता दिएको बताउँछन् ।
योसँगै आभारभूत सिद्धान्त, आवश्यकताका आधारमा नगरको विकास र बजेटलाई परिचालन गरिएको उनको भनाई छ । नगरलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर, स्वरोजगारमुखी, नमुनानगर बनाउने पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, वातावरणमैत्री प्रविधियुक्त बनाउन थालिएको उनको तर्क छ । त्यसैगरेर उद्यमशीलता, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्यका योजनाहरु पनि अ गाडी बढाइएको छ । समग्र नगरको विकास र योजनाको बारेमा प्रदेश टुडेकर्मीसँग नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
उपमहानगरपालिकालाई अघि कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार प्रमुखको रुपमा आएदेखि जनप्रतिनिधिको अभावमा रहेको नगरलाई क्रियाशील बनाएर लगेका छौ । झण्डै दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि भएर आउँदा धेरै नै चुनौती र अप्ठेरा थिए ।
यो सँगै ठूलो अवसर पनि प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि घोराहीलाई हामीले अवसरका रुपमा लिएर विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरेका छौँ । घोराही समृद्ध घोराही, वातावरणीय हिसावले स्वच्छ घोराही, व्यवसायीकरण र सबै क्षेत्रमा विकासको पहुँच पु¥याउने अभियानमा अघि बढिरहेको छ । खास गरेर विकासको गतिमा उपमहानगर अहिले तिव्ररुपमा गएको छ ।
विगतको वर्षमा पनि यो अभियान चलेको थियो । यो वर्ष पनि यहि अभियान प्राथमिकतामा रहेको छ । जेहोस् घोराहीलाई स्मार्ट सिटी नमुना सिटी र मैत्री सहर निर्माणका लागि गरिने कार्यहरु गरिरहेका छौचँ ।
घोराहीलाई राम्रो सहर बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । त्यसैगरेर घोराहीको इतिहासलाई दर्साउने गरी घोराहीको ट्राफिक चोकमा घोडाको स्टाचु निर्माणको तयराीमा छौँ । घोराहीलाई विकासमा समृद्ध, बालमैत्री, पूर्ण सरसफाईयुक्त नगर बनाउने लक्ष्यले महत्व पाइरहेको छ ।
नगरमा विकासको गति कस्तो छ ?
विकासको गति तिव्र छ । आवश्यक सबै प्रकारका विकासहरुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर तिव्रताका साथ बढाएका छौँ । विकास यहि भन्दा पनि विकासको आधार मानिने पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर गति दिएका छौँ ।
सबै वडा मुकाम र नगर मुख्यालयसम्म कालोपत्रेले जोडने गरी काम र योजना भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा यो पूरा गर्छौ । १९ वटै वडालाई सडक पहुँचमा ल्याउँदै छौँ । दुर्गममा रहेको सैघा, चाख्लीघाट, बस्तीखोलाजस्ता विकट क्षेत्रमा समेत यो वर्ष सडक सञ्चाल पु¥याएका छौँ ।
पूर्वाधारमा बाटोलाई प्राथमिकता दिन सकेमा त्यो क्षेत्र समृद्ध हुने विश्वास छ । कृषि उपज बजारसम्म आइपुग्छ । नागरिकको पहुँच बढ्छ । कृषिलाई आधुनिकीरण गर्न सकिन्छ । सिंचाई प्रशस्त भएका कृषिलाई व्यवसायीकरण पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
त्यसैगरेर अहिले ताल तलैया, ड्याम निर्माणले तिव्रता दिएका छौँ । पानी अभावको संकट टार्न, सिंचाईको व्यवस्थापन गर्ने र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न लक्ष्य ताल, पोखरी बनाउन थालिएको हो ।
अहिलेसम्म २० वटा पोखरी र ड्याम बनिसकेका छन् । यो वर्ष पनि ४ करोड रुपैयाँको यहि विकासमा काम हुँदैछ । सबै वडामा पोखरी बनेका छन् । पोखरीलाई बहुउपयोगी बनाउने योजना छ ।
ल्याण्डफिड साइडलाई व्यस्थित गरेर फोहरको वर्गीकरण गरि आय आर्जन गर्दैछौ । कुहिने फोहोरबाट ग्याँस निकाल्ने तयारी भएको छ । नगल्नेलाई बिक्री गरेर आम्दानी गर्दैछौ ।
अर्काे कुरा नगरलाई हरियाली बनाउने अभियान पनि चलेको छ । सबै सडक हरियाली बनाउने कार्यको थालनी पनि भएको छ । यसमै रहेर हरियाली प्रवद्र्धन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै गरेर नगरका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउन सबै वडामा नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यो पूर्वाधार सम्पन्न नभएका वडामा केहि दिनमा व्यवस्थापन हुँदैछ ।
हामीले महत्वपूर्ण रुपमा लिएको एउटा अर्काे विषय छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि फाराम भरेका विपन्न, गरिब युवायुवतीलाई आयआर्जनमा लैजान कुखुरापालनको लागि सहयोग गर्ने योजना छ ।
उहाँहरुलाई व्यवसायका लागि तीन सय कुखुराका चल्ला उपलब्ध गराउँदैछौँ । योसँगै कृषिसम्बन्धी नियमित अनुदान चलिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि राम्रा प्रयास भएका छन् । दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय मर्ज, शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइमा गुणस्तर ल्याउने प्रयास जारी छन् ।
यति गर्दागर्दै पनि नागरिकको अपेक्षा अनुसारको विकास गर्न सकिएको छैन । दुई वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा आफै कानून बनाउने, आफै काम गर्ने भएको हुँदा सोचे र अपेक्षा गरेको अनुसारको विकास नगरेको अनुभूति भएको छ ।
अबका वर्षमा योजना अनुसारको विकासलाई तिव्रता दिन्छौँ । कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजनले केही समस्या ल्याएको थियो । गत वर्ष १ अर्ब ४९ करोडको बजेट नगरका ल्याएको थियो । यो बर्ष १ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । यो वर्ष केही ठूला योजनाहरु पूरा हुँदैछन् ।
समृद्ध नगरका लागि योजना के के छन ?
नगरले गरेका सबै गतिविधि समृद्धउन्मुख नै छन् । खास समृद्धिका आधार के हुन् भन्ने होला ? त्यसका सबै क्षेत्रको विकास भएमा र सबैको सवै क्षेत्रसँगको पहुँचको विकास भए समृद्धि त्यहि स्थापित हुन्छ भन्ने हो ।
घोराहीले पनि उत्पादन बढेमा र सडकको पहुँच पुगेमा कृषिको र कृषकमा समृद्धि आउने छ । औद्योगिकरणको विकास भएका उद्योगी व्यापारीमा समृद्धि आउँछ ।
नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकता सहजरुपमा पूरा हुने र पूर्वाधारका विकासको पहुँच बढेमा नागरिकमा समृद्धि आउँछ, बेरोजगारहरुमा रोजगार सिर्जना हुनु र श्रमको सम्मान हुने अवस्था आएका समृद्ध घोराही हुन्छ भन्ने सोचले त्यहि अनुसारका गतिविधि सञ्चालन गरेका छौँ ।
वडामा विकास समानुपातिक भएन भन्ने गुनासो पनि आउछ ?
घोराही उपमहानगरपालिकामा समानुपातिक नै विकास भएको छ । कसैलाई कुनै पनि आधारमा कम बढी गरिएको छैन । आवश्यकताको आधारमा समानुपातिक विकास गरेका छौँ । वडाको कुरामा पनि त्यहि नै लागू हुन्छ ।
नगरले गर्ने हरेक विकास वडाकै माग र सिफारिसमा हुने हो । त्यसकारण पनि विकासमा विभेद छैन । अहिले पनि प्रत्येक वडालाई एक÷ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ । त्यसले पनि भएन भने आवश्यकता अनुसारको समानुपातिक विकास गर्छौ । नगरको विकास समानुपातिक तवरले नै भएको छ ।
नगरको विकासका लागि थुप्रै योजनाहरु अघि सारेका छौँ । त्यसमा पनि केहि महत्वपूर्ण योजनाहरु रहेका छन् । पहिलो योजना नगरको प्रोफाइल निर्माण हो । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसको आधारले नगरको बस्तुस्थिति तयार गर्छ ।
अर्काे योजना नगरको गुरुयोजना निर्माण गर्ने हो । त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ । गुरुयोजना बन्दै छ । यसको आधारमा काम गर्न संस्थागत हुने अपेक्षा छ । अर्काे एकीकृत सहरी विकास योजना हो । यी नहुँदा अहिले केही काममा समस्या आएको थियो । अब सहज हुनेछ ।
जनतासँगको प्रत्यक्ष अनुभुति कस्तो रहेको छ ?
जनप्र्रतिनिधिको रुपमा जिम्मेवारी समालेपछि यो दोस्रो पटक हो । पहिले गाविस हुँदा रामपुर गाविसको अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल काम गरे । अहिले नगरको प्रमुख भएर आएको छु । सार्वजनिक पद भएकाले सबैलाई समान व्यवहार गरेर काम गर्दा आन्नद आउँदो रहेछ ।
यसले जनतासँगको सम्बन्ध बढाएको छ । काममा सेवामा उत्साह थपेको छ । जनताकै सल्लाह सुझावमा कम गरेको छु । उहाँहरुसँग भेटघाट होस् र प्रत्यक्ष सम्वाद होस् भने प्रायः म कार्यलयमै बस्ने गरेको पनि छु । जनतासँगको कामले प्रफुल्ल छु ।
यो मेरो अवसर हो भन्ने पनि ठानेको छु । सुझाव अनुसार काम गर्दा आनन्द पनि आउँदो रहेछ । धेरै कुराको अवसर पनि हुँदो रहेछ । जनता चनाखा भइसकेका छन्, जनताको चेतनास्तर बढी भएको छ । जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न धेरै सहज भएको छ ।
तपाईले दुई वर्षभित्र गरेका महत्वपूर्ण काम के ?
धेरै गतिविधि त मैले भनिनै सकेको छु । खासगरेर चार/पाँचवटा विषयलाई यो बीचमा महत्व दिएको छु । पहिलो नगरको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । अनलाईन सिस्टमबाट काम १९ वटै वडामा काम सुरु भएका छन् ।
पानीको महत्व बुझेर पानी बचाउने अभियानमा लागेका छौँ । पोखरी र ड्याम निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै फोहर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम गरेका छौँ । पूर्वाधार विकास त्यसमा पनि बाटो कालोपत्रे धेरै नै गरेका छौँ । अर्काे कुरा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत प्रयास थालेका छौँ । दुई वर्षको अवधिमा गरेका केही प्रयास यिनै हुन् ।
घोराही उपमहानगरको बजेटको अवस्था कस्तो छ ?
घोराहीको विकास बजेट जिल्लामा अन्य तहभन्दा राम्रो छ । विगतको भन्दा धेरै बढेर यो वर्षमा बजेट ल्याएका छौँ । राजस्वसमेत आन्तरिक रुपमा बढेको छ । यो वर्ष १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बजेट छ । गत वर्ष १ अर्ब ४९ करोड थियो ।
दाना बढ्यो, उत्पादनको मूल्य बढेन
दाङ क्रिकेट लिगको उपाधि रोयल तुलसीपुरलाई
June 2, 2018 epradesh